जे-जेडबाट उत्कृष्ट उद्धरणहरू - Victor Mochere
जे जे-जे भन्दा उत्तम उद्धरण
शॉन कोरी कार्टर, जे-जेड को रूपमा व्यावसायिक रूपमा चिनिन्छ, एक अमेरिकी र्‍यापर, गीतकार, रेकर्ड कार्यकारी, उद्यमी, र मिडिया मालिक हुन्। उहाँ इतिहासमा सबैभन्दा प्रभावशाली हिप-हप कलाकारहरू मध्ये एक मानिन्छ। Def Jam Recordings को पूर्व CEO को रूपमा आफ्नो भूमिकाको लागि प्रसिद्ध, उहाँ कान्ये वेस्ट, रिहाना र J. कोल लगायत कलाकारहरूको रचनात्मक र व्यावसायिक सफलताको लागि केन्द्रिय हुनुहुन्छ। जे-जेडले पहिलो पटक सन् १९८० को दशकमा आफ्नो सांगीतिक करियर सुरु गरे।
उनले 1995 मा रेकर्ड लेबल Roc-A-Fella Records को सह-स्थापना गरे र 1996 मा आफ्नो पहिलो स्टुडियो एल्बम Reasonable Doubt जारी गरे। एल्बमलाई व्यापक आलोचनात्मक सफलताको लागि रिलीज गरियो, र संगीत उद्योगमा आफ्नो अडानलाई बलियो बनायो। Jay-Z ले एक व्यापारीको रूपमा आफ्नो क्यारियरको लागि महत्त्वपूर्ण सफलता र मिडिया ध्यान प्राप्त गरेको छ। 1999 मा, उनले कपडा रिटेलर रोकावेयर स्थापना गरे, र 2003 मा, उनले लक्जरी स्पोर्ट्स बार चेन 40/40 क्लब स्थापना गरे।
दुबै व्यवसायहरू करोडौं-डलरको कर्पोरेसनमा परिणत भएका छन्, र उनलाई 2008 मा मनोरन्जन कम्पनी रक नेसन सुरु गर्न अनुमति दिनुभयो। 2015 मा, उनले टेक कम्पनी एस्पिरो प्राप्त गरे र तिनीहरूको मिडिया स्ट्रिमिङ सेवा टाइडलको जिम्मेवारी लिए। २०२० मा, उनले "मोनोग्राम" सुरु गरे, भांग उत्पादनहरूको लाइन। विश्वको सबैभन्दा धेरै बिक्री हुने संगीत कलाकारहरू मध्ये एक, जे-जेडले धेरै प्रशंसाहरू जितेका छन्।
Jay-Z बाट केही उत्कृष्ट उद्धरणहरू सूचीबद्ध छन्।
"एक बुद्धिमान मानिसले मलाई मूर्खहरूको बहस गर्दैन। किनभने दूरीबाट व्यक्तिले के भन्न सक्दैन कि कसलाई। " - जे जे-जे
"म सबै सपना छ। अरू कसैलाई विश्वास गर्दैन। अरू कसैलाई देख्न सक्दैन, अरू कोही तर मलाई। " - जे जे-जे
"बच्चाहरूको रूपमा हामीले गरीब हुनको लागी शिकायत गरेनौ; हामी यसबारे कुरा गरौं कि हामी कसरी प्रचलित हुन सक्छौं र जीवनशैली प्राप्त गर्न उत्प्रेरित गर्छौं जुन हामीले सकेका छौं। र चाँडै हामीसँग कम पैसा थियो, हामी यो देखाउन इच्छुक थिए। " - जे जे-जे
"आफ्नो प्रतिष्ठा भन्दा तपाईंको चरित्र संग अधिक चिन्तित हुनुहोस्। किनभने तपाईंको क्यारेक्टर तपाईं वास्तवमा के हुनुहुन्छ, किनकि तपाईंको प्रतिष्ठा मात्र हो जुन अरुले तपाईलाई सोच्नुहुन्छ। " - जे जे-जे
"मैले मेरो पहिलो एल्बम रेकर्ड गर्न पाएको छु, म 26 थियो, मलाई पेन वा पेपरको आवश्यकता थिएन। मेरो मेमोरीलाई गीत सुन्न, शब्दहरूको सोच्न र टेपमा राख्नु भएको थियो।" - जे जे-जे
"मलाई नबिर्सनुहोस् मलाई के भन्नु भएको थियो ... मलाई बताउनुहोस् किन उनीहरु यो भन्न को लागी धेरै सहज थिए।" - जे जे-जे
"या मलाई प्रेम गर, वा मलाई एक्लै छोड्नुहोस्।" - जे जे-जे
"म विश्वास गर्दछु संसारका हरेक व्यक्ति प्रतिभाशाली स्तरको प्रतिभासँग जन्मिएको छ। आफैँलाई जो पनि प्रतिभाशाली हुनुहुन्छ आफैलाई लागू गर्नुहोस्, र तपाईं संसारमा केहि गर्न सक्नुहुनेछ। " - जे जे-जे
"म विश्वास गर्दछु उत्कृष्टता उच्च स्तर मा र अधिक प्रदर्शन गर्न सक्षम छ।" - जे जे-जे
"मलाई सुरुवात देखि कलाकार र सीईओ बाध्य हुनुपथ्र्यो, त्यसैले मलाई एक व्यवसायी जस्तो लाग्न बाध्य भयो किनभने जब म एक रेकर्ड सम्झौता गर्ने प्रयास गरिरहेको थिएँ, यो मेरो आफ्नै मा रेकर्ड सम्झौता प्राप्त गर्न गाह्रो थियो या त छोडेर वा मेरो आफ्नै कम्पनी सिर्जना गर्नुहोस्। " - जे जे-जे
"म नरकमा गएर, म स्वर्गको आशा गर्दैछु।" - जे जे-जे
"म हारिनँ, हार हारका लागि, त्यहाँ एक महत्त्वपूर्ण पाठ सिक्न, त्यसैले यो मेरो लागि प्रकट हुन्छ।" - जे जे-जे
"म कोने पसल, बोडोगामा दौडिदिनेछु, र केवल पेपर थैला लिन्छु वा रस किन्न चाहन्छु - केवल कागज पेटी पाउनको लागि। अनि म कागज पेटीमा शब्दहरू लेख्छु र यी विचारहरू मेरो जेबमा सामान लगाउँदासम्म मलाई फर्केर आयो। त्यसपछि म उनीहरूलाई नोटबुकमा स्थानान्तरण गर्नेछु। " - जे जे-जे
"म एक नम्र बच्चा हुँ। म एक कुहिरो पानीको खरिद गर्दछु। " - जे जे-जे
"म दर्पण हुँ। यदि तपाईं मेरो साथ ठिक हुनुहुन्छ भने, म तिम्रो साथ ठिक छु, र विनिमय सुरु हुन्छ। तपाईले के देख्नुभएको छ के तपाई प्रतिबिम्बित हुनुहुन्छ। यदि तपाईंले मनपर्ने कुरा मनपर्दैन भने, तपाईंले केहि गर्नुभयो। यदि म Standoffish हुँ, यदि तपाईं हुनुहुन्छ किनभने। " - जे जे-जे
"म ज्ञानको लागि भोकाएको छु। सम्पूर्ण चीज उज्ज्वल र उज्ज्वल बनाउन हरेक दिन सिक्नको लागि हो। यो संसारको बारेमा के हो। " - जे जे-जे
"म कुकुर जस्तो छु। मैले कहिल्यै बोल्दैन, तर म बुझ्छु। " - जे जे-जे
"म मरिनदेखि डराउँदैन। म कोशिश नगर्ने डर लाग्छ। " - जे जे-जे
"मैले आफैलाई कहिल्यै देखेको छु र भनेँ कि मलाई एक निश्चित प्रकारको मान्छे वरिपरि निश्चित तरीका हुनु पर्दछ। म सधैं मेरो लागि सच्चा रहन चाहन्छु, र मैले त्यसो गर्न सकिन। मानिसहरूले त्यो स्वीकार्नुपर्छ। " - जे जे-जे
"यदि मान्छे तपाईलाई घृणा गर्नुहुन्न भने, तपाई सम्भवतया ठूलो कुराहरू गरिरहनु भएको छैन।" - जे जे-जे
"यो धेरै धेरै उल्लङ्घन हो। तपाईंसँग कुनैसँग कुराकानी छ, र उहाँ जस्तै छ, 'तपाई धेरै राम्रो बोल्नुहुन्छ!' म मनपराउछु, 'तपाई के मतलब छ? के तपाईं बुझ्न अपमानजनक हुनुहुन्छ? " - जे जे-जे
"जीवन जिउँदो जीवनको लागि होईन। आकाशमा कहीं पनि हेर्नुहोस्। " - जे जे-जे
"मानिसहरू तपाईलाई अजीब लाग्दछन्, तपाईलाई बदलिदिनुहुन्छ। तपाईं जस्तै कि त्यहीं रहन कडा मेहनत गर्नुभयो। " - जे जे-जे
"मानिसहरूको आदरको सफलता। उनीहरूले ठूलो आदर गर्छन्। तिनीहरू पनि तपाइँको संगीत मनपराउँदैनन्। यदि तपाईं एकदम ठूलो हुनुहुन्छ भने, मानिसहरू तपाईका लागि तयार छन्। " - जे जे-जे
"मेरो लागि रैप फिलिम बनाउने, कथाहरू बताउँदै, र गहिरो तरिकाले गहिरो भावनाहरु जस्तै छ। र म रैप र चलचित्रहरूमा उस्तै भयो। " - जे जे-जे
"तिनीहरू भन्छन् कि एक विशाल को क्यान्सर मा खडा विशाल को भन्दा धेरै देख्न सक्छ। त्यसैले मैले मेरो कंधेमा सम्पूर्ण राप संसार पाएको छु, तिनीहरू मभन्दा बढी देख्न खोज्दैछु। " - जे जे-जे
"उनी कुरा गर्छन्। हामी बाँच्यौ। उनीहरूले के भन्नुहुन्छ कसलाई? " - जे जे-जे
"जो सफल हुन्छन् तिनीहरूका डरहरू हटाउँछन् र काम गर्छन्। ती व्यक्तिहरू आफ्ना डरहरू पेस गर्दैनन् र अफ्ठ्यारोमा बस्छन्। " - जे जे-जे
"हामी कुराकानीको माध्यमबाट मानिसहरूलाई सम्पर्क गर्दछौं।" - जे जे-जे
"जब तपाईं बढ्दै हुनुहुन्छ, तपाईंको बुबा तपाईंको सुपर हीरो हुनुहुन्छ। एक पटक तपाईं आफैलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिलाई एकपटक एकपटक, एक पल्ट जब तपाईं उसलाई यस्तो उच्च पर्दामा राख्नुहुन्छ र तपाईंलाई तपाईंलाई तल दिइन्छ, तपाई फेरि पनि त्यो दुखाइ अनुभव गर्न चाहनुहुन्न। " - जे जे-जे
"तपाईं विद्यालयको लागि तिर्न सक्नुहुन्छ तर तपाईं कक्षा खरीद गर्न सक्नुहुन्न।" - जे जे-जे
"तपाईं सफलता चाहानुहुन्छ जुन तपाईं चाहानुहुन्छ, तर यसलाई प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईं हानिकारक हुन सक्नुहुन्न। तपाईं पर्ची गर्न सक्नुहुन्न, तपाईं सुत्न सक्नुहुन्न। एउटा आँखा खुला, वास्तविक र सदाको लागि। " - जे जे-जे
"तपाइँ सफलतापूर्वक तपाईले सफलता पाउनु भन्दा विफलतामा सिक्नु हुन्छ।" - जे जे-जे
Jay-Z नेट वर्थ २०२०
एमिनेम नेट वर्थ २०२०
Snazz Bongani भन्छन्:
अप्रिल 14, 2019 11 मा: 16 हूँ
“म एक व्यापारी मानिस होइन। म एउटा व्यवसाय हुँ, मानिस! "